I-IATA imemezela izikhulumi zeNgqungquthela Yomhlaba Yezokuthutha Ezindiza eBoston
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Zokuhlangana Komkhakha » I-IATA imemezela izikhulumi zeNgqungquthela Yomhlaba Yezokuthutha Ezindiza eBoston
Airlines • Airport • Izindaba Zezinhlangano • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Imfundo • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • emihlanganweni • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
UWillie Walsh, uMqondisi Jikelele we-IATA
I-WATS izofaka amaseshini ngekusasa lempahla yomoya kulandela ukusebenza kwayo ngobuqhawe ngesikhathi senhlekelele, iqale kabusha ngokuphepha ukuxhumeka komhlaba wonke, kanye nochungechunge lwezingxoxo zomlilo eziletha ama-CEO enkampani yezindiza kanye neqembu elihlukahlukene lababambiqhaza bezimboni kubandakanya nabanikezeli bezingqalasizinda, abakhiqizi bemishini yokuqala kanye nabanye abahlinzeki.
I-International Air Transport Association imemezele lolu hlelo nezikhulumi ze-World Air Transport Summit (WATS).
Ingqungquthela Yomhlaba YezokuThutha Emoyeni (i-WATS) izobanjwa ngokuhlanganyela ne-IATA Annual General Assembly (AGM) eBoston, e-USA, ngo-3-5 Okthoba.
Izihloko zeseshini zifaka phakathi ukubhekana nenselelo yokuguquguquka kwesimo sezulu, ukuxhuma kabusha umhlaba ngokuphepha ngesikhathi se-COVID-19, ukwehluka kanye nokufakwa kwezindiza, ukusebenzisana nabalingani bezinkokhelo zenani, kanye nempahla yomoya.
I-International Air Transport Association (IATA) imemezele lolu hlelo nezikhulumi zeNgqungquthela Yomhlaba Yezindiza (i-WATS), ebanjwa ngokuhlanganyela ne Umhlangano Jikelele Wonyaka we-IATA (AGM) eBoston, e-USA, ngo-3-5 Okthoba.
“Ngijabule kakhulu ukuthi iWorld Air Transport Summit izophinde yenzeke njengomcimbi obukhoma okokuqala ngqa kusukela ngoJuni 2019. Izinkundla ezingokoqobo azithathi indawo yenani elenziwa lapho abantu behlangana ubuso nobuso. Njengoba sihlela ukuthi imboni ivuseleleke kusuka ku-COVID-19 futhi ibhekane nezinkinga ezibucayi zokuguquka kwesimo sezulu, izingxoxo kanye nezingxoxo phakathi kwabaholi kanye nababambiqhaza embonini zizobaluleka kakhulu, ”kusho uWillie Walsh, IATAUMqondisi Jikelele.
Izihloko zeseshini zifaka phakathi ukubhekana nenselelo yokuguquguquka kwesimo sezulu, ukuxhuma kabusha umhlaba ngokuphepha ngesikhathi se-COVID-19, ukwehluka kanye nokufakwa kwezindiza, ukusebenzisana nabalingani bezinkokhelo zenani, kanye nempahla yomoya. I-CEO eyaziwayo njalo u-Insight Debate izobuya, izobhekwa nguRichard Quest we-CNN, ihange le-Quest Means Business.
Impendulo yezindiza ekuguqukeni kwesimo sezulu izobeka phambili uhlelo. Inkulumo yosuku izokwethulwa nguRachel Kyte, oyiDini yeSikole iFletcher, iTufts University kanye nalowo owayengummeleli okhethekile UN UNobhala-Jikelele kanye noMphathi Omkhulu Wezamandla Aqhubekekayo Wabo Bonke. UKyte phambilini wayeyiphini likamongameli weQembu Lezwe Lomhlaba futhi eyisithunywa esikhethekile sokuguquguquka kwesimo sezulu, okuholele ekutheni kufinyelelwe esivumelwaneni saseParis.
Lokhu kuzolandelwa yiphaneli lababambiqhaza abakhulu abagxile ekusimameni okubandakanya:
UGuillaume Faury, Isikhulu Esiphezulu, i-Airbus
Stanley Deal, Isikhulu Esiphezulu, Izindiza zeBoeing Commercial
U-Annie Petsonk, IPhini Eliyinhloko Likasekela Nobhala Wezindiza Nezindaba Zamazwe Omhlaba, uMnyango Wezokuthutha wase-US
UPieter Elbers, Isikhulu Esiphezulu, i-KLM
UDkt Jennifer Holmgren, isikhulu esiphezulu, uLanzaTech